७ राम्रा छोटा हिन्दी फिल्म, हेर्नुस् युट्युबमा :: Setopati
७ राम्रा छोटा हिन्दी फिल्म, हेर्नुस् युट्युबमा
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ २८
छोटा फिल्म हेर्ने दर्शकका लागि युट्युबमा सयौं फिल्म भेटिन्छन्। यिनमा फिचर फिल्ममा जमेका निर्देशकदेखि स्थापित कलाकारले काम गरेका छन्।
छोटा फिल्मलाई सिर्जनशील निर्देशकले छोटो समय र थोरै लगानीमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने माध्यमसमेत बनाएका छन्। अर्कोतिर, दैनिक जीवनका मसिना घटनाबाटै कथा टिपेर सामाजिक कथा भन्ने मामिलामा पनि छोटा फिल्मको योगदान महत्वपूर्ण छ।
दर्शकको ध्यान तान्दै छोटा फिल्मको स्तर उकास्ने प्रयासमा भारतीय युट्युब च्यानल 'लार्ज सर्ट फिल्म' अग्रपंक्तिमा छ। यसका शृंखलाले सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि देखिन्छ।
यो सूचीमा त्यही शृंखलाका सात राम्रा फिल्म छानिएको छ।
देवी, निर्देशकः प्रियंका बनर्जी
अलग अलग पृष्ठभूमिका नौ महिला एउटा ठूलो कोठामा छन्। भाषा, लवज, उमेर सबै फरक-फरक। आर्थिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि फरक भएका यी महिलाको सोचाइ र भोगाइ पनि फरक छ। यही भिन्नताका कारण उनीहरू एकअर्काको कुरामा सहमत हुन सकिरहेका छैनन्।
उनीहरूको बहसको विषयको केन्द्रमा एक जना उनीहरू जस्तै पात्र छिन्, जो ढोका बाहिर छिन्। मुद्दा एउटै कुरामा अड्किएको छ, उनका लागि ढोका खोल्ने कि नखोल्ने?
उनीहरू त्यसरी बहस गर्नुको कारण र उनीहरूको निर्णय थाहा पाउन फिल्म हेर्नुहोला।
ढोका खुल्नु वा नखुल्नुको विवादसँगै फिल्मले तपाईंलाई झट्का दिनेछ। कुनै थ्रिलर वा नराम्रो सपनाका रुपमा धेरै पछिसम्म यो फिल्म तपाईंलाई याद रहनेछ।
'देवी' मा काजोल, श्रुति हसन, नेहा धुपिया, नीना कुलकर्णीजस्ता स्थापित कलाकारले अभिनय गरेका छन्। उनीहरू लगायत सबै पात्रको अभिनयले फिल्म अझ हेर्न योग्य बनेको छ।
मुम्बई वाराणसी एक्सप्रेस, निर्देशकः आरती चाबरीया
यो मृत्युसँग साक्षात्कार भएपछि जीवन बाँच्न सुरू गर्ने पात्रको कथा हो। मृत्युबोधपछिको जीवन बाँच्ने यी पात्र ठूला व्यापारी हुन् जो जीवनका अन्तिम दिन बनारसमा काट्ने निर्णय गर्छन्।
बनारस जानेक्रममा उनले रेलमा गुजराती पात्र, बनारसमा रिक्सा चालक रफिक र घाटमा एक बालकजस्ता पात्रहरू भेट्छन्। यिनै पात्र र बनारस आश्रम, घाट र गंगाको पानीले उनको भोगाइलाई नयाँ दृष्टि दिन्छ।
तर फिल्म यही सकिँदैन। यसपछि फिल्ममा के हुन्छ? थाहा पाउन हेर्नुस्, 'मुम्बई वाराणसी एक्सप्रेस'।
कथा र प्रस्तुतिसँगै मुख्य पात्रको भूमिकामा दर्शन जारिवालाको अभिनय मन जित्ने खालको छ। हिन्दु र मुस्लिमबीच अनेक दरार भएको भारतीय समाजको सन्दर्भमा हिन्दु र मुस्लिम पात्रबीचको मित्रता पनि अर्थपूर्ण छ।
यो एक्सप्रेसको सयरले तपाईंलाई घन्टौं शान्त मुद्रामा जीवन र मृत्युबारे घोत्लिने खुराक दिनेछ।
अनुकुल, निर्देशकः सुजय घोष
शिक्षकले आफ्नो जीवन सहज बनाउन अनुकुल नामको रोबोट घर लिएर आउँछन्। अनुकुल रोबोटलाई फिल्ममा मान्छेकै रूपमा देखाइएको छ। आम मान्छेजस्तै कुराकानी र बहस गर्ने अनुकुलको प्रवेशपछि उनलाई किनेर ल्याउनेको जीवन अनुकुल बन्छ कि जटिल?
फिल्मको केन्द्रमा यही कुरा छ जसलाई प्रविधिको विकाससँगै थपिने द्वन्द्वका रुपमा चित्रण गरिएको छ।
यो फिल्म यथार्थवादी सिनेमामा ख्याति कमाएका सत्यजीत रायको 'अनुकुल' कथामै आधारित छ। यो फिल्म हेरेपछि आजभन्दा चार दशकअघि नै सत्यजीतले आजको समयको कथा लेखेका रहेछन् भन्ने महसुस हुन्छ।
फिल्ममा सौरभ शुक्ला र प्रारब्ध चटर्जीको मुख्य अभिनय छ। यो अत्यधिक रुचाइएको छोटो फिल्ममध्ये एक हो जसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि आध्यात्मसम्मका विषय छुन्छ।
द स्कुल ब्याग, निर्देशकः धीरज जिन्दाल र अनुशुल अग्रवाल
यो फिल्म यति सरल र संवेदनशील छ कि यसको कथाबारे जानकारी दिने ठाउँ थोरै छ। फिल्मका बारेमा धेरै जानकारी दिनु भनेको यो फिल्म हेर्दाको मजा खराब गर्नु सरह हो।
यत्ति मात्रै थाहा पाउनुस्, यो आमा र छोराको प्रेमको कथा हो। एउटा यस्तो प्रेम जसलाई दुई मुख्य कलाकारको अभिनय र बोलीचालीले कायल बनाउँछ।
आमा र छोरा दुवैसँग माया बस्ने यो फिल्म सत्य घटनामा आधारित छ। रसिका दुगल र सरताज आरकेको अभिनय रहेको यो फिल्मले दर्जनौं अवार्ड जितेको छ।
द डे आफ्टर एभ्री डे, निर्देशकः अनुराग कश्यप
धेरै युवतीले दैनिक जीवनमा बजार जाँदा-आउँदा वा बसमा यात्रा गर्दा पुरुषको हेराइ र छेडखानी सहनुपरिरहेको हुन्छ। विरोध गर्न मन हुँदाहुँदै पनि प्रतिरोध गर्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका हुँदैनन्।
'द डे आफ्टर एभ्री डे' का तीन महिला पात्र यस्तै अवस्थामा छन् जो लामो समयदेखि सचेत भएर हिँड्छन् तर प्रतिरोध गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। तर कहिलेसम्म?
यही प्रश्न र उत्तरबारे बनेको फिल्म हो, 'द डे आफ्टर एभ्री डे'।
फिल्मको मुख्य भूमिकामा राधिका आप्टे, सन्ध्या मृदुल र गितान्जली थापा छन्। उनीहरू मौन र विद्रोही चरित्रका रुपमा देखिएका छन्।
जुस, निर्देशकः नीरज घेवान
भान्सामा काम गरिरहेकी महिला र बैठकमा खानपिन र गफमा व्यस्त पुरुषहरू। धेरैको घरभित्र देखिने सामान्यजस्तो लाग्ने यस्तै केही दृश्य र केही संवादमा सकिन्छ, 'जुस'। फिल्म सरल छ तर उत्तिकै सशक्त पनि।
'मसान' फिल्मका निर्देशकले यो छोटो फिल्ममा विम्बहरूसँग मजाले खेलेका छन्। तातो आगो र गर्मीले भतभती पोलिएकी पात्रको मन पनि उत्तिकै उकुसमुस र बाफिएको छ।
मुख्य पात्र सेफालीले फिल्ममा जहाँ, जसरी र जुन शैलीमा जुस पिउँछिन्, त्यसले फिल्मभित्रका पात्रलाई जस्तै दर्शकलाई पनि हेरेको हेरै बनाइदिन्छ।
इन्टेरियर क्याफे नाइट, निर्देशकः अधिराज बोस
एउटा क्याफेभित्र दुई जोडी छन्। एउटा वयस्क र अर्को युवा जोडी। फरक फरक टेबल कुर्सीमा बसेका यी दुई जोडीबीचको संवाद नै 'इन्टेरियर क्याफे नाइट'को कथा हो।
तीस वर्षपछि भेटिएका वयस्क जोडी र छुट्टिन लागेका युवा जोडीका संवादलाई फिल्ममा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, तपाईं अलमलमा पर्नुहुन्छ। अनि सोचमा पर्नुहुनेछ, यी दुवै जोडी एउटै हुन् वा अलग?
तीन दशकपछि भेटिएका प्रेमीका रूपमा मुख्य भूमिकामा नसिरुद्दिन शाह र शेरनाज पटेलको अभिनय जीवन्त छ।
युवा जोडीको भूमिका स्वेता बासु र नवीन कस्तुरियाले निर्वाह गरेका छन्। कलाकारको अभिनय, प्रस्तुति शैली र संवादले फिल्मको ओज राखेको छ। प्रेमीहरूको बिछोड र पुनर्भेटका धेरै कथा हेरे पनि 'इन्टेरियर क्याफे नाइट' अलग छ।